nidaamyada kululaynta soo-gelinta soo noqnoqda ee dhexdhexaadka ah ee been abuurka, sameynta kulul, iwm
Bogga ugu weyn / Qalabka korontada ee korontada / MFS nidaamyada kuleylka soo noqnoqda
Categories: Qalabka korontada ee korontada, Taxanaha Heerka Joogtada ah Tags: inta badan dhexdhexaad ah, annealing inta jeer ee dhexdhexaad ah, been abuur dhexdhexaad ah, kuleyliyaha dhexdhexaadka ah, kuleylka dhexdhexaadka ah, Isticmaalka qalabka kuleylka dhexdhexaadka ah, mashiinka kulaylka dhexdhexaad ah, Isticmaalka awoodda kuleylka dhexe, Nidaamka kuleylka kuleylka dhexe, Dhexdhexaad dhexdhexaad sameynta kulul, baaxadda dhexdhexaadka ah, kululaynta inta jeer ee dhexdhexaad ah
Nidaamyada kululaynta soo-gelinta soo-noqnoqoshada dhexdhexaadka ah iyo qalabka korontada kuleylka
Nidaamyada kululaynta soo-gelinta soo noqnoqda ee dhexdhexaadka ah (Taxanaha MFS) waxaa lagu soo koobay inta jeer ee kala ah 500Hz ～ 10KHz iyo power100 ～ 1500KW ， waxaa badanaa loo isticmaalaa kuleylka la dhex geliyey, sida kuleylka kuleylka ee qaabeynta, dhalaalida, dheelitirka iyo kuleylka loogu talagalay alxanka. Kala duwanaanta baahsan ee soo noqnoqda awgeed, kuleylka kuleylka ku qanacsan ayaa si fudud loogu gaari karaa naqshadeynta si loo tixgeliyo dhammaan qodobbada sida rabitaanka gelitaanka, waxtarka kuleylka, buuqa shaqada, xoogga kicinta magnetic iyo wixii la mid ah
MFS-yada mashiinnada soo noqnoqda dhexdhexaadka ah ， qaab-dhismeedka oscillating-ka isbarbar socda ayaa loo isticmaalaa. Qaybaha awoodda moduleka IGBT iyo jiilkeenna afraad ee farsamooyinka xakamaynta rogista ayaa lagu dabaqayaa si loo hubiyo tayo sare iyo kalsooni. Ilaalin buuxda ayaa la qaatay sida ilaalinta hadda jirta, ilaalinta biyaha oo ku fashilmay, ka hortagga heerkulka, ilaalinta korantada, ilaalinta wareega gaaban iyo ilaalinta wajiga oo aan gaarin. Markaad shaqeyneyso, soo saarida hadda, korantada soo-saarka, soo-celinta oscillating iyo awoodda wax-soo-saarka dhammaantood waxaa lagu soo bandhigaa qeybta qalliinka si looga caawiyo qaabeynta gariiradda iyo hagaajinta mashiinka.
Marka loo eego adeegsiga kala duwan, laba qaabdhismeed oo waaweyn ayaa la adeegsadaa:
(1) Qaab dhismeedka 1 generator MF koronto-dhaliye + kaabsato + gariiradda
Qaab dhismeedkan waxaa la qaataa badanaa adeegsi badan, sida usha mashiinka kuleylka dhalinta iyo mashiinka dhalaalida. Qaab dhismeedkani waa mid fudud, lumay oo tayo sare leh kuleylka.
Qaab dhismeedkan, badanaa 3 ilaa 15 mitir tuubo naxaas ah ayaa loo baahan yahay si loo sameeyo gariiradda; danab ka mid ah gariiradda ayaa sarreeya illaa 550V, oo aan ku go'doonsanayn nidaamka korontada, sidaas darteed gariiradda waa in si fiican loo daboolaa si loo hubiyo badbaadada hawlwadeennada.
（2） Qaab dhismeedka 2 generator MF koronto-dhaliye + dabool + tarjumaan + cirif
Qaab dhismeedkan waxaa sidoo kale loo isticmaalaa badanaa, sida ku dhalaalida faaruqinta, kuleylka dhexdhexaadka ah Mashiinka adag ee induction iyo wixii la mid ah. Iyada oo loo marayo naqshadeynta saamiga isbeddelka, soosaarka hadda iyo danab waa la xakamayn karaa si loo qanciyo rabitaanka kuleylka kala duwan
Qaab-dhismeedkan, gariiradu waa u badbaado hawlwadeennada, tuubbada gariiradda ayaa si toos ah ula soo bixi kara daboolka. Gariiradda way fududahay in la sameeyo iyadoo dhawr jeer oo keliya la rogayo. Dabcan, qalabka wax lagu beddelo ayaa kordhin doona kharashka iyo isticmaalka mashiinka.
daydo Awooda wax soo saarka qiimeeyay Xanaaqa soo noqnoqda Input hadda danab Input Wareegga shaqada Socodka biyaha miisaanka aragti
MFS-100 100KW 0.5-10KHz 160A 3fase 380V 50Hz 100% 10-20m / saac 175KG 800x650x1800mm
MFS-160 160KW 0.5-10KHz 250A 10-20m / saac 180KG 800x 650 x 1800mm
MFS-200 200KW 0.5-10KHz 310A 10-20m / saac 180KG 800x 650 x 1800mm
MFS-250 250KW 0.5-10KHz 380A 10-20m / saac 192KG 800x 650 x 1800mm
MFS-300 300KW 0.5-8KHz 460A 25-35m / saac 198KG 800x 650 x 1800mm
MFS-400 400KW 0.5-8KHz 610A 25-35m / saac 225KG 800x 650 x 1800mm
MFS-500 500KW 0.5-8KHz 760A 25-35m / saac 350KG 1500 x 800 x 2000mm
MFS-600 600KW 0.5-8KHz 920A 25-35m / saac 360KG 1500 x 800 x 2000mm
MFS-750 750KW 0.5-6KHz 1150A 50-60m / saac 380KG 1500 x 800 x 2000mm
MFS-800 800KW 0.5-6KHz 1300A 50-60m / saac 390KG 1500 x 800 x 2000mm
Naqshadaynta ka jawaab celinta danab oo ay korsato wareegga taxanaha taxanaha LC ee IGBT.
Tikniyoolajiyadda rogitaanka IGBT, tamar sarreysa oo ka sarreysa 97.5%.
Kaydinta tamarta 30% marka la barbar dhigo tikniyoolajiyadda SCR. Wareegga isdaba-marinta taxanaha, isku-xirnaanta induction oo leh koronto sare iyo mid hooseeya, markaa tamar luminta ayaa aad u hooseysa. Tikniyoolajiyada jilicsan ee jilicsan ayaa la adeegsadaa markaa luminta luminta ayaa aad u hooseysa.
Waxaa lagu bilaabi karaa 100% xaalad kasta.
100% wareega shaqada, 24hours si joogto ah u shaqeynta awoodda ugu badan.
Is-waafaqid yar iyo awood sare. Cunsurka korantada ayaa had iyo jeer harsan 0.95 kor ku xusan inta lagu jiro mashiinka socda.
Tikniyoolajiyadda raadraaca soo noqnoqda ayaa si otomaatig ah ugu suurtagelisa awoodda korantada inay ku ekaato heer sare dhammaan howlaha kuleylka.
Isku halaynta wanaagsan, IGBT waa transistor is-damin ah oo hubiya in loo rogo guusha isla markaana qaadata difaac isla markaaba; IGBT waxaa loo adeegsaday shirkadda infineon, soo saaraha adduunka caan ka ah.
Way fududahay in la shaqeeyo oo la dayactiro, matoorka soosaarida IGBT MF way fududahay in laga hortago lana dayactiro sababo la xiriira qaab dhismeedka wareegga fudud. Waxay leedahay difaac kaamil ah.
Kala duwan oo foornada kululaynta, nooc gaar ah oo loo habeeyay kuleylka kuleylka sida macaamiisha u baahan tahay.
Dareemuhu ku xiran yahay.
CNC ama PLC qalabka korontada lagu xakameeyo ee arjiga qallajinta.
Nidaamka qaboojinta biyaha.
Neefsashada usha sambabaha.
Nidaamka kuleylka oo dhan otomaatig ah.
Been abuur kulul / sameysmo loogu talagalay qalab shaqo oo weyn.
Adkaynta dusha sare qayb weyn.
Kuleylinta foorarsiga tuubada.
Daaweynta alxanka tuubada.
Kala dhalaalida aluminium naxaas ah iyo wixii la mid ah.
Isku-duub-gacmeedka shaashadda duuban.
Qalabka Cadaadiska Magnetic-ka
Qaadista Qashinka iyo Nusto kululaynta IodT Moudle
Qalabka Suuq-geynta Calaamadaha Electromagnetic